Yekutarisa yekutsvaga tekinoroji inoperekedzwa neyakagadzirwa njere ECommerce nhau
Imwe yei zvigadzirwa zvemagetsi iyo iri munguva ichangopfuura boom, ndiyo inoonekwa yekutsvaga tekinoroji achiperekedzwa njere dzekugadzira pane nhare mbozha. Iyi tekinoroji ine mushandisi kuisa kana kutora pikicha uye zvichienderana nemufananidzo uyu, njere dzakagadzirwa Tarisa zvigadzirwa zvakafanana zviri kutengeswa.
Ndokunge, kana mushandisi ari kutsvaga juzi dema, ingoisa pikicha yejuzi dema uye ivo vachazoratidzwa hembe dzakafanana.
Kunyangwe ichi chisiri tekinoroji nyowani, kana iri mukushandiswa kwekutengeserana, uye kunyanya mukutengesa kuburikidza nenhare mbozha. Kwete zvehembe chete, kutsvaga uku kunogona kuwana zvigadzirwa zvemumba, mabhuku, mafirimu, maCD nezvimwewo rudzi rwechigadzirwa iyo inogona kuwanikwa muchitoro. Izvo zvinonyanya kubatsira kune vanhu vari kutsvaga chaicho chigadzirwa, kana kutotenga muzvitoro zvinoshandisa mutauro watisingazive.
Amazon yaisanganisira iyo kutsvaga kwekuona mune yako iOS app muna 2014, kubvumira vashandisi kubatanidza kamera yavo pamwe nekushandisa kutsvaga zvigadzirwa, zvakare vachiwedzera sarudzo yekuenzanisa mitengo yechigadzirwa chimwe chete muzvitoro zvakasiyana. Vashandisi vakashandisa iyo application vanotaura kuti inonyanya kubatsira pakuziva mabhuku, mafirimu uye compact discs.
Target yaisanganisira iyo kutsvaga kwekuona mune yako iOS app, kunyange kubvumira vashandisi kuongorora barcode kuti vatsvake chigadzirwa muchitoro chepamhepo, kana zvitoro zvemuno zviri padyo.
Kana iwe uine chitoro chepamhepo uye uine application kune fambisa kutengesa kwako, Funga kusanganisira yekutsvagisa mufananidzo kubatsira vatengi vako kuwana chaicho chigadzirwa, nezvose zvavakange vachitsvaga, nenzira yakapusa uye yakapusa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Kutarisa kwekutsvaga tekinoroji inoperekedzwa nehungwaru hwekugadzira
Nyaya dziri pasocial network Instagram, WhatsApp uye Facebook